Nagarik Bazaar - फेसबुक एपको अटोप्ले फिचर - बन्द किन गर्ने र कसरी गर्ने ?
फेसबुक एपको अटोप्ले फिचर - बन्द किन गर्ने र कसरी गर्ने ?
फेसबुकको फिड स्क्रोल गर्दा गर्दै आफैं भिडियोहरु प्ले हुनेगर्छन - यस फिचरलाई अटो प्ले अर्थात् स्वत भिडियो प्ले हुने फिचर भनिन्छ । यस फिचरको मुख्य हेतु नै प्रयोगकर्ताको ध्यानाकर्षण गर्नु हो जसबाट प्रयोगकर्ताले फेसबुकमा धेरै समय बिताउने छन् ।
तपाईंलाई मन पर्ने विषयमा अटोप्ले भएको भिडियोले तपाईंलाई केहि फरक पर्दैन तर फेसबुक जस्तो सामाजिक संजालमा तपाईंलाई उचित हुने भिडियोहरु मात्र प्रकाशित हुन्छन् भन्ने हुँदैन । फेसबुकका साथीहरुले अरु कुनै स्रोतबाट सेयर गरेको भिडियो पनि अटो प्ले हुनेगर्दछ जसबाट तपाईंले नचाहेको वा तपाईंको लागि हानिकारक साबित हुनसक्ने विषयको भिडियो तपाईंले पनि देख्न सक्ने सम्भावना बढ्छ । हानिकारक र अनुचित विषयका भिडियोहरुबाट टाढा रहनुको लागि पनि फेसबुकमा अटो प्ले फिचर बन्द गर्नु उचित हुन्छ ।
माथि उल्लेखित कारण लगायत फेसबुकमा अटोप्ले फिचर बन्द गर्नुको केहि अन्य फाइदाहरु पनि रहेको छ । मोबाइल डेटाबाट फेसबुक चलाउने प्रयोगकर्ताहरुले फेसबुक अटोप्ले फिचर बन्द गर्नासाथ डेटाको निकै कम प्रयोग भएको अनुभूति गर्नेछन् । अटो प्ले फिचर बन्द गर्नाले मोबाइलको ब्याट्री पनि बचत हुन्छ किन कि भिडियो प्ले गर्दा निकै धेरै ब्याट्री चार्जको खपत भइरहेको हुनेगर्दछ ।
अटोप्ले फिचर फेसबुकमा मात्र नभएर अन्य सामाजिक संजालमा पनि भेटिन्छन्। कतिपय वेबसाइटमा पनि आवाज सहितका अटोप्ले हुने भिडियोहरु राखिएका हुन्छन् जसले इन्टरनेट चलाउनुको अनुभव खल्लो बनाउछ ।
फेसबुकमा अटोप्ले फिचर बन्द गर्ने तरिका
यदि तपाईं फेसबुक लाइट एप चलाउनु हुन्छ भने तपाईंले अटोप्ले फिचरको बारेमा चिन्ता लिईरहनु पर्दैन । साधारण अर्थात् पूर्ण फिचर भएको फेसबुक एपमा अटोप्ले फिचर बन्द गर्नका लागि तल लेखिएको तरिका अपनाउनुहोस्:
१. आइफोन र आइप्याडका लागि
स्क्रिनको तल पट्टि भएको मेनुलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्
“Settings & Privacy” (सेटिंग र प्राइभेसी) मा टच गरेपछि “Settings.” (सेटिंग)मा टच गर्नुहोस्
त्यहाँबाट “Media and Contacts,” (मिडिया र कन्ट्याक्ट) मा सेलेक्ट गर्नुहोस्
“Videos and Photos.” (भिडियो र फोटो) को अप्सनमा टच गर्नुहोस्
Autoplay (अटोप्ले) फिचरलाई बन्द गर्नुहोस्
२. एन्ड्रोइड स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटका लागि
स्क्रिनको माथि पट्टिको दाहिने भागमा भएको मेनुलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्
Autoplay (अटोप्ले) फिचरलाई बन्द गर्नु, उक्त अप्सनमा “Never Autoplay Videos.” मा चयन गर्नुहोस्